Mourinho Oo Diiday Inuu U Warramo Telefishanka Manchester United
HomeWararka MaantaMourinho Oo Diiday Inuu U Warramo Telefishanka Manchester United
Jose Mourinho ayaa diiday in uu la hadlo warbaahinta u gaarka ah Manchester United ee lagu magacaabo MUTV.
Mourinho ayaa ganafka ku dhuftay in uu la hadlo wariye Stewart Gardner oo ka hawlgala telefishanka Manchester, kaddib markii uu su’aalo adag weydiiyey ciyaartii West Ham ay la galeen barbar dhac 1-1 ah, waxaana sida uu warku sheegay uu Mourinho ka biyo diiday qaabka kakan ee su’aalaha uu u weydiiyey weriyuhu isagoo ka hawlgala telefishan ay kooxdu iska leedahay 27-kii bishii hore ee November.
Saddexdii ciyaarood ee ka dambeeyey kulankaa uu Mourinho ka cadhooday su’aalaha wariyaha, waxay Manchester ciyaartay saddex ciyaarood oo kala ahaa kulankii EFL Cup ee West Ham, ciyaartii barbar dhaca ee Everton iyo ciyaartii kale ee guusha uu ka soo hooyey ee Zorya Luhansk ee Europa League, kuwaas oo dhamaantood uu diiday in uu su’aalo weydiiyo wariye Gardner.
Mourinho ayaa la sheegay in uu culays badan haysto, maadaama kooxdiisu ay barbar dhacyo badan gashay, guuluhuna ku adkaadeen, taas oo keentay in uu u muuqdo in uu gebi ahaanba ka baxay tartanka loogu jiro horyaalnimada sannadkan.
Ma aha Mourinho oo kaliya tababaraha diiday in uu la hadlo telefishanka kooxdiisa, laakiin wax aka horreeyey macallinka Chelsea, Antonio Conte oo ganafka ku dhuftay in uu la hadlo telefishanka Chelsea ee ChelseaTV, wakhti ay xaaladdu ku adkayd oo dhalleecayn badan loo jeediyey bilowgii xili ciyaareedka.
Tababarihii hore ee Manchester, Sir Alex Fergusonn ayaa isaguna sidan oo kale u diiday in uu la shaqeeyo ama uu war siiyo MUTV wakhtigii uu tababaraha ka ahaa Manchester.
Telefishanka Manchester wuu ka duwan yahay ka Chelsea, sababtoo ah waxa uu u shaqeeyaa sida telefishannada caadiga ah ama mid ganacsi, waxaana laga daawadaa dunida oo dhan.
Wariyaha uu su’aalihiisa ka cadhooday Mourinho ee Gardner ayaa ku biiray telefishanka MUTV sannadkii 2007, wakhtigaas oo ay ka soo qaadatay BBC, waxaanu la shaqeeyey Ferguson, Louis van Gaal iyo David Moyes, shaqaalaha ay wada shaqeeyaanna waxay amaaneen qaabka dublamaasiyadeed ee uu ula macaamilo tababareyaasha.
Jadwalka Ciyaaraha Caawa – Live Uga Daawo www.cadalool.com